ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): Fashion Image ( Chit Thu Thot )
Download With PDF File
ဒီစာမူကို ဘယ်အချိန်ကရေးလိုက်ခဲ့မှန်းတောင် မမှတ်မိတော့ပါဘူး ။ လစဉ်လတိုင်း မဂ္ဂဇင်းတော်တော်များများကို ၀ယ်လေ့ရှိတဲ့ ကျမ မနေ့က ထုံးစံတိုင်း ပန်နီဆူးလားမှာ ဧပရယ်လ်အတွက် စာအုပ်တွေသွားဝယ်ရင်း ကားပေါ်မှာ စာမျက်နှာတွေ လျှောက်ကြည့်ဖြစ်တော့ ကိုယ့်နာမည်ကိုယ်မြင်မှ ငါရောဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီး စာကို အစအဆုံးပြန်ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ ဖတ်ပြီးမှ အံ့သြမိတယ်။ ဒီစာမူကို ပို့ပေးရမလားဆိုပြီး ချတ်တင်မှာ အမတစ်ယောက်က သူကြိုက်လို့မေးတာနဲ့ ပို့လေဆိုပြီး သူ့ကိုခွင့်ပြုခဲ့တာ မထင်မှတ်ဘဲ ဒီလိုတွေ့လိုက်ရတာ အံ့သြခဲ့မိပါတယ်။
ကျမရေးတဲ့စာတွေနဲ့ပတ်သတ် ကျမကို နားလည်ပေးခဲ့သူ မရှိသလောက်ရှားတဲ့အထဲမှ ကျမ ဖြစ်ချင်တာ ၊ လုပ်ချင်တာ ၊ အရာအားလုံးကို နားလည်လက်ခံခဲ့ပြီး အနွေးထွေးဆုံး ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ အနားမှာအတူရှိနေပေးတဲ့ “သူ့”ကို ပထမဆုံး ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
မပျက်မကွက် အားပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေမောင်နှမများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
စာဘယ်လိုစရေးဖြစ်လည်းဆိုတော့ ခံစားချက်တွေ များတာရယ် ၊ စာရေး ၀ါသနာ တော်တော်ပါတာရယ်။ ဒီအချက် (၂)ခုကြောင့် ရေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
ဖန်တီးမှုအနုပညာစာတွေလိုပဲ ကြည့်ပေးကြပါ ဘော်ဒါတို့ရေ။
Congrats,, my little sis. =) I'm happy to hear that. you're supported.
Congratulation, Nyi Ma Lay. You are doing great work.
Congratulation sis..U r cool.. :) So keep it up naw..
Congratulation, my dear sis. Good job. wish u2babrighter star than ever.
ဂျူးရဲ့ စာလေး မဂ္ဂဇင်းထဲ ပါလာလို့ ၀မ်းသာလိုက်တာ။
ဆက်ရေးအုံးနော် ညီမလေး ..။
အရေးကောင်း အတွေးကောင်းတဲ့ ညီမလေးကို မမေ အမြဲ အားပေးနေပါတယ်။